Xagee bay ku danbeysey 9.6 milyan Emaaraatka looga Qabtey Airporka Aadan Cade ?:-(Akhriso) – hareerley
Xagee bay ku danbeysey 9.6 milyan Emaaraatka looga Qabtey Airporka Aadan Cade ?:-(Akhriso)
Taariiqdu markey aheyd April 8 2018 Ciidamada Amaanka Garoonka Diyaaradaha ee Aadan cade ayaa Qabtey Lacag ay siday diyaarad Emaaratka laga lahaa lacagtaasi ayaa lagu Qiyaasey 10 Milyan Oo Doolarka Mareykanka ah lacagtaasi Oo sida la Sheegey in la dhigayo bangiga dhexe ayaa ilaa iyo haatan aanan la Ogeyn waxa lagu sameeyey iyo meeshii ay martey.
Lacagtaan ayaa dowlada Emaraarku Sheegeen in ay aheyd mushaarka Ciidamada markaasi ay Tababarayeen Ee joogey Maamul Gobaleedka Puntiland iyadoo markaasi uu khilaaf ka jirey Gudoomiyaha Baarlamaanka Federalka Maxamed Cisamaan Jawaari iyo Dowlada.
Lacagahaasi ayaa markaasi loo Arkayey kuwo lagu laaluushayey Xildhibaanada baarlamaanka iyadoo markaasi loolan iyo khilaaf Xoogani ka dhaxjirey baarlamaanka oo markaasi u kala Qeybsamey laba Qeybood oo kala aragti fogaa taas oo ku aadaneyd Gudoomiyaha Baarlamaanka Oo markii danbe iska Casiley xilka Gudoomiyenimo ee baarlamaanka.
Hadaba lacagtaasi Xiligaasi la qabtey Ayaan dib loogu Celin Emaraatka waxna leyska weydiin markale iyadoo Shacabka badankiisa Qabey in lacagtaasi lagu qarashgareeyo Ciidanka Oo iyagu ilaa iyo haatan aanan la siin lacago ku filan oo noloshooda maareeya .
Su’aashuse waxay tahay Xageebey ku danbeeysey lacagtaasi Gaareysey 9.6 milyan oo qiyaas ahaan aheyd 10 milyan Oo doolarka mareykanka aheyd xageese ku danbeysey?
Hadaba warsaxaafadeed markaasi soo baxay ayaanu halkaan idiin soo dhigi doonaa kaasi Oo cadeyn u ah in lacagtaasi la Qabtey iyo tariiqda la qabtey iyo wixii waqtigaasi laga dhahay.
W/Q:- xuseen xaaji Ali
← Sudan protests: Army fires at Khartoum rally, killing two
(Dhageyso):-Hogaamiyaha Hir-Shabeele Oo ka Walaacsan Xaalada Galmudug →